अज्ञात रोगका कारण २ सय भन्दा बढी बिरामी - Kantipath.com
अज्ञात रोगका कारण २ सय भन्दा बढी बिरामी
रुकुम । जिल्लाको आठविसकोट नगरपालिका–३, खदीमा अज्ञात रोगका कारण २०० भन्दा बढी स्थानीयवासी बिरामी परेका छन् ।
हप्ता दिनयता उनीहरु धमाधम् बिरामी परिरहेको स्थानीयवासीले जानकारी दिएका छन् । टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, हातगोडा दुख्ने, बान्ता हुनेजस्ता लक्षणका कारण गाउँका धेरैजसो बासिन्दा बिरामी परेको स्थानीयवासी कल्पना बुढाथोकीले जानकारी दिइन् ।
‘भिन्न–भिन्न खालका बिरामी दैनिकरुपमा बढ्दै गएका छन्,’ उनले भनिन् । बिरामीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ । स्यालाखदी स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य औषधिसमेत नरहेको बुढाथोकीले बताइन् । हालसम्म उक्त प्रकोपबारे पत्ता लाग्न सकेको छैन् ।
हरेक दिन बिरामी बढ्दै गएपछि आठविसकोट नगरस्तरीय स्वास्थ्य संस्थाबाट दुईजना स्वास्थ्यकर्मी औषधिसहित त्यसतर्फ पठाएको नगर प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘एक÷एकजना स्वास्थ्य सहायक र अहेव भरियासहित औषधि लिएर गएका छन् ।’
‘तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउन नसके महामारी फैलने होकी भन्ने चिन्ता छ,’ नगर प्रमुख केसीेले भने । टोली बिहीबार (आज) साँझसम्म खदी पुग्ने बताइएको छ ।
Previous Previous post: १ सय ९० डीएसपीको सरुवा, को कहाँ परे हेर्नुहोस सुचि !
Next Next post: ६ जना दैनिक हराउँछन्, कहाँ गए होलान् २ हजार बालबालिका ?
भावी आइजीपी को होला ? डिएसपीको सरुवाको तयारी